အပေါစား ရိုက်ချက်များ ..(သို့) Heavy Snow – Very Cold [Jan-23-2012] Tokio | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » အပေါစား ရိုက်ချက်များ ..(သို့) Heavy Snow – Very Cold [Jan-23-2012] Tokio
အပေါစား ရိုက်ချက်များ ..(သို့) Heavy Snow – Very Cold [Jan-23-2012] Tokio
Posted by ムラカミ on Jan 26, 2012 in Photography | 25 comments
ဟိုလဂါ မုဒ် က ထွက်လို့ကို မရ၀ူးရယ်ဗျာ…..
ခွင့်လွှတ်ကြပါ….ဘောင်တွေ တမင် မှောင်ထားပါတယ်..
ခုတော့ ဖျားဘီ ……၊ စိတ်လေဒယ် …..ဖျားလိုက်ရင်
ကမှော်ရေ့ ကျုပ် အိုင်အက်စ်အို သိုင်း ကျင့်နေတယ်ဗျ ….
ကောင်းပါ့ ဂီဂီရေ …
မှော်အောင်ရင် ပြောပါဦး …
ကျွန်တော်ကတော့ ပါရမီဖြည့်ဖက် စကိုင်းနက်နဲ့
ခန္ဓီပါရမီ ဖြည့်နေတယ် …
ဂလုနေရင်း လေဖြတ်မှာပဲ ကြောက်ရတယ်
အိမ်ပေါ်ပြန်တက် ဂလုလေဗျာ …
လမ်းမှာ ထိုင် ဂလုရင်တော့ …ကိုယ့်ပါ …..ရေခဲရိုက်ပီးသားပဲ….
စဂါးမစပ် ဘယ်တော့ မင်ဂလာ အရက် သောက်ရမလဲ သဒို့သားဂျီး ….?
ှ၎ပုံမြောက်ပုံကိုအရမ်းသဘောကျတယ်။ အဲလိုနှင်းတွေကျနေတာကို အပြင်မှာမြင်ဘူးချင်တယ်။ အခုတော့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေမှာပဲမြင်နေရတာ။ အရမ်းလည်းအေးနေမှာပေါ့နော်။ ရန်ကုန်မှာအဲဒီလို နှင်းမကျတာတောင်အေးနေတာ အဲဒီမှာဆိုရင်တော့… အမယ်လေး ပြောရင်းနဲ့ချမ်းလာပြီ…
flash ဖောက်ထားတာပါ …မျက်စိကြိမ်းတယ်ဗျ…..
နှင်းစက်တွေက ဖျန်းကနဲ အလင်းပြန်လို့ပါ…
ဒါဆို ဘီယာဆိုင်တွေ ရေခဲ ကောက်ပြီး ရောင်းရင်တော့ ကြီးပွားမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်။ ဂီဂီ ရေခဲတွေ ပါဆယ်ထုပ်ပို့လိုက်ကွာ…. ဈေးကွက်စီးပွားရေးလုပ်ရအောင်…
ဒီလောက်အေးတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုများနေနေကြတယ်မသိဘူး။ ငါသာဆိုမွှေ့ယာထဲကထမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးဘဲ ဖားသက်ပြင်းရေ…အအေးခံပြီးရိုက်ထားပေးလို့။
အပေါစားမဟုတ်ပါဘူး.. အပြင်းစား ရေရောစရာမလိုဘူး…
လေသလပ်တာနဲ့ အေးသွားတယ်… တားတားတို့အကြိုက်ပဲ…
တယ်လည်း မုဒ်ဝင်ခံစားနိုင်တဲ့ လူသားပေပါလား….
ဖားသက်ပြင်းက စားသက်ပြင်းလို့ ပြောင်းလိုက်ပါရားဟင်…
ရန်ကုန်ရောက်ရင် ကျနော်ကို ဓါတ်ပုံလှလှလေး ရိုက်ပေးပါလား..
နောက်ပိုင်း ဗေဒင်ဟောစားရင် လူရှိန်တဲ့ ပုံလေးဖြစ်ချင်လို့..
ရိုက်ပေးမှလား.. မရိုက်ပေးရင်… အိသဒ္ဓါမိုးလေးနဲ့ ပြန်ပေးစားမယ်.. ငှဲငှဲ…
နှင်းကိုမြင်တိုင်း ဒါဏ်ရာဟောင်းက ပေါ်ပေါ်လာတယ် … ကုန်းကျော်တံတားတစ်ခုအပေါ်မှာ နှင်းနဲ့ချော်လဲပြီး ခါးနာသွားတာ သေရာပါဖြစ်သွားတယ် … နဲနဲအေးလာတိုင်း ခါးက ဒါဏ်ရာပေါ်လာတယ် … နှင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ ခါးကအလိုလိုနာလာရော …
အပေါစားရိုက်ချက်များဆိုလိုသာပဲ အကောင်းစားဆိုရင် လိုက်လို့တောင်မမှီနိုင်ဘူးပဲ
ပုံလေးတွေ သဘောကျလို့ ကူးယူသွားပါတယ် ဂီဂီရေ ….
(ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်မချရဘူး သူကြီးက ဆာဗာဖိုးမပေးနိုင်ပဲ ထွက်ပြေးရင် ဒုက္ခ) …
ခင်ဗျား MPS က ကိုကင်း လားဗျ….
MPS က မဟုတ်ပါဘူး
မှတ်ချက်။ တပည့် ….
ဆောင်းတွင်းမှာ နှင်း စပြီး ကျတဲ့ နေ့ ဆို သိပ်ပျော်ရတယ် ။
ပထမဆုံး နှင်းကျတဲ့ နေ့ မှာ တွေ့ ရတဲ့ ချစ်သူက ထာဝရ ချစ်သူဆိုတာတောင် ရှိသေး ။
နှင်းကျတဲ့ နေ့ ဆို လုံးဝ မအေးဘူးနော ။
လက်အိပ်တောင် စွပ်စရာ မလို ။
နှင်းပွင့် ကလေးတွေ ငြိမ်ပြီး ကျနေတဲ့ ည အချိန်ဆို ပိုပြီး နေလို့ ကောင်း ။
အဲ…..နှင်း ဆက်တိုက် ကျပြီး နောက်တနေ့ကောင်းကင်ကြီးက ကြည်လင်ပြီး ကြယ်တွေ
မြင်ရတဲ့ နေ့ ဆိုရင်တော့ သေပြီ..ဆြာ ပဲ ။
လွမ်းလိုက်တာ…ပေါင်ဖြူမလေးတွေ နဲ့နှင်းပွင့်ဖြူလေးတွေကို ။
ကကြီး နဲ့ဂျာပွန် က ရှုခင်းတူတယ် ။
အိပ်မက်ထဲက မှော်ဆန်တဲ့ နေရာလေးပါပဲ…..
နှင်းဝေတဲ့ ဆောင်းမှာသိပ်လွမ်းတယ်….ညီလေးဂီ တစ်ချို့ပုံလေးတွေကိုနှစ်သက်လို့ ကူးသွားပါတယ်၊ကျေးဇူးပါညီလေးဂီရေ…
ကျွန်တော့် လို ကင်မရာ နဲ့ အဝေးကြီးလိုကောင်အတွက်တော့ ဒါတွေဟာ အရမ်းလန်းတဲ့ အမြင့်စား အကောင်းစားတွေ ပါ ဘဲ ။ ကြိုက်တယ်ဗျာ ။ အိုင်ယာလန် ထီ ပေါက်ခဲ့ရင် တစ်ပုံ ကို ကန်စိမ်း ၃၀၀၀ ပေးပြီးသား လို့ သာ မှတ် ။
နှင်းကိုတော့ ချစ်ပါတယ်…။ အေးတာတော့ မခံစားနိုင်ဘူးကွယ်…။ ဒီနှစ် နေပြည်တော်မှာတော်တော်အေးပါတယ်…။ နှင်းတော့ ကျတာ မတွေ့ဘူး…။ စောင်ထဲကမှမထွက်တာ ဘယ်တွေ့မလဲ……..။
အပင်ပေါ်က နှင်းတွေက ၀ါဂွမ်းပွင့်လေးတွေလိုပဲ၊
ဆောင်းရယ်နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ်လို့ တွံတေးကြီးကဆိုသွားတယ်။
တက္ကသိုလ်မှာဝေတဲ့နှင်းကတော့ ဒီနှင်းမျိုးမဟုတ်တဲ့ မြူပဲဖြစ်မယ်။
အဲသလို နှင်းကျလို့ ကားသွားမရရင် ဂီဂီတို့ အလုပ်ပိတ်သလား၊
အားကျတယ် ဂီဂီရယ် …
ကိုယ့်မှာတော့ တောသားလေးဆိုတော့ တောပုံ တောင်ပုံပဲ ရိုက်ရတယ် …
ဂီဂီက ကိုယ်တို့ဆီက တောပုံ တောင်ပုံ ရိုက်ချင်တယ် ဆိုတော့ စရိတ်ငြိမ်းခေါ်မယ် ..
ပြီးရင် ဂီဂီကလဲ ဂျာပွန်ကို စားရိတ်ငြိမ်း ပြန်ခေါ်လေ ..
ပေါင်ဖြူလေးတွေ ရိုက်ချင်လို့ပါဂျာ …
လှလိုက်တာနော် … အေးချမ်းမှုရဲ့အောက်မှာ အရာရာတိတ်ဆိတ်နေပေမယ့်.. လျှပ်စစ်မီးတွေကလည်း လင်းလို့ …. ။
မစ္စတာဂီရေ အပေါစားရိုက်ချက်ဆိုရင် ဘယ်ဖျားမလဲနော့။
တွေ့တာကတော့ ပုံတွေမှာ အသံတွေ မဲ့နေတယ်။ ( တချို့ ပုံများက ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အသံတွေပါ ကြားရတတ်လို့ပါ) ။ တိတ်ဆိတ်တာက အေးချမ်းတယ်ဆိုတာထက် အထီးကျန်မှုကို ပိုပြီး အားပေးနေသလိုပဲ။ ဒီလိုတိတ်ဆိတ်မှုက လွမ်းနေသူကို ငိုချင်စိတ်ပေါက်စေသလိုပဲ ။ (ဖြစ်နိုင်တာက ကျမအခု Joanna Wang ရဲ့ wild world ကို နားထောင်နေလို့လဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
နောက်တခုတွေ့တာက သက်ရှိသက်မဲ့ အရာအားလုံးက ကောင်းကင်ပေါ်က ကျလာတဲ့ မှုန်မွှားတဲ့ နှင်းလေးကိုတောင် အံမတုနိုင်ပဲ သူပြုသမျှနုပြီး လည်စင်းပေးနေရတာကိုပါ။
ကူးသွားပါတယ်။ ဆောင်းမကုန်ခင် wall paper လေး လဲရလို့။ကျေးဇူးပါ။
အဲ့လိုနှင်းတွေကျတဲ့နေရာ တစ်ခါလောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်တယ်